दशाहरु भनेको के हो ? ग्रहहरुको प्रभावहरु हुन्छ कि हुँदैन ? ग्रहसँग खेलबाड नगरौं, सर्वनाश हुनसक्छ ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यदि आकाशमा कुनै ग्रह हिँडिराखेको छ, चलिराखेको छ भने कडा रुपमा प्रभाव त आउँछ । अहिले बाहिर सूर्य लागेको छ भने सूर्यको ताप त आउँछ, प्रकाश त आउँछ । यसलाई रोक्न सकिन्न । तर, आफू बच्न चै सकिन्छ । छाता ओढेर बसौं, प्रभावबाट बच्न सकिन्छ । र, यो प्रभावबाट बच्ने तरिका हो, आफूभित्रका चक्रहरुलाई जागृत गर्ने । ध्यान गर्ने, ध्यानबाट मात्रै चक्रहरु जागृत हुन्छ । हामी सबैलाई पनि ध्यान गर्ने अवसर मिलोस्, आफूभित्र रहेका सम्पदाहरुलाई जागृत गर्ने अवसर मिलोस् । जोश, जाँगर, उमङ्ग र आत्मविश्वासले पूर्ण हुने अवसर मिलोस् ।
(जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा जीवन विज्ञान विशेषज्ञ रमेश नेपालको रेडियो प्रवचनबाट साभार गरिएको सामग्री ।)